Jirama : HO FOANA TANTERAKA NY DELESTAZY -
AccueilSosialyJirama : HO FOANA TANTERAKA NY DELESTAZY
15/02/2017 admintriatra Sosialy, Vaovao songadina 0
Afaka ny adin-tsain’ny mponina. Nanamafy tamin’ny alalan’ny fanambarana ny orinasa Jirama fa ho foana tanteraka ny delestazy.
Voalaza tamin’izany fa hiampy 10 MW ny tanjaky ny famatsiana herinaratra any amin’ny faran’ny volana Febroary ary mbola hitombo 10 MW ihany koa izany any amin’ny faran’ny volana Marsa ho an’ny tobim-pamokarana ao Mandroseza.
Raha io fanampiana ny tanjaky ny herinaratra io, nanazava ny teo anivon’ny orinasa Jirama fa mamokatra herinaratra hatramin’ny 40 MW ny tobim-pamokarana ao Mandroseza hatramin’ny volana Avrily. Ary mamokatra hatramin’ny 60 MW kosa ireo milina hafa hatramin’ny volana Jona. Izany hoe, rehefa atambatra ny famokaran’ny herinaratra azo avy amin’ny tohodrano sy termika dia ho foana tanteraka amin’izay ny delestazy, indrindra ho an’Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina.
Voalaza fa mitohy hatrany kosa ny famatsiana solika ho an’ny any amin’ny faritany mba hamokarana herinaratra amin’ny tokony ho izy sy amin’ny ilain’ny mponina. Na izany aza, efa tafapetraka ihany koa mantsy ireo rafitra mpanara-maso amin’ny halatra solika eo anivon’ny Jirama.
Araka ny efa nambaran’ny filoham-pirenena sy ny lehiben’ny governemanta dia tsy handefitra amin’ny halatra eo anivon’ny orinasa Jirama ny fitondrana. Voalaza mantsy teo aloha teo fa miseholany ny halatra jiro, halatra solika, halatra taribin-jiro, sns teo anivon’ity orinasa mpamokatra herinaratra eto amintsika ity.